Igqwetha lamazwe aphesheya le-alimony eNetherlands - Law & More
Ummeli woqhawulo-mtshato » I-Alimony yeQabane
Ngokomgaqo, unelungelo lokufumana inkxaso-mali kwiqabane ukuba, emva koqhawulo-mtshato, awunayo ingeniso eyoneleyo yokuzixhasa. Umgangatho wokuphila kwakho ngexesha lomtshato uyakuthathelwa ingqalelo ukuze uqiniseke ukuba unelungelo lokufumana isondlo. Ukuziqhelanisa, elinye lamaqabane liya kufumana ilungelo lokufumana inkxaso-mali. Kwiimeko ezininzi lo ngumfazi, ngakumbi ukuba ebenoxanduva lokongamela umzi nabantwana. Kwimeko apho, umfazi uhlala engenayo ingeniso okanye umvuzo olinganiselweyo kwimisebenzi yexeshana. Kwimeko apho indoda iyizalisekisile indima 'yendoda yendlu' kwaye umfazi wenze ikhondo lomsebenzi, indoda inokuthi ibambe iqabane kunyango.
Ukuba ufuna unilaterally rhoxisa okanye utshintshe iqabane isondlo, oku kufuneka kwenziwe kwinkundla. Singafaka isicelo sotshintsho enkundleni egameni lakho. Inkundla ingalitshintsha iqabane lakho isondlo, oko kukuthi, ukunyusa, ukunciphisa okanye ukuseta ukuya kwi-zero. Ngokomthetho, kufuneka kubekho 'utshintsho lweemeko'. Ukuba inkundla ifumanise ukuba akukho tshintsho lweemeko, isicelo sakho asiyi kunikwa. Olu luvo aluchazwa ngakumbi emthethweni kwaye ke lunokuxhalabisa uluhlu olubanzi lweemeko. Ukuziqhelanisa, oku kuhlala kubandakanya utshintsho kwimeko yezemali yelinye lala maqabane.
• Kwimeko yokusweleka kweqabane lakho okanye lowo ubeliqabane lakho;